Mpanamboatra vano voalanjalanja tsara indrindra sy orinasa |Tongli
Ny vano voalanjalanja, eo ambanin'ny toeran'ny ergonomika mahafa-po, ny fampiasana ny teknolojia fanaraha-maso, ny vano voalanjalanja pneumatic miaraka amin'ny fiasa fampiatoana feno, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoana fikarakarana ara-nofo isan-karazany.
Balance crane dia karazana fitaovana fampiakarana fitaovana vaovao, izay mampiasa mekanika fampiakarana miolikolika miavaka mba hanainga zavatra mavesatra, fa tsy asa tanana mba hampihenana ny herin'ny fitaovana mekanika.
Miaraka amin'ny "gravity voalanjalanja", ny vano mizana dia mahatonga ny hetsika ho malama, mitsitsy asa, tsotra ary mety indrindra amin'ny asa amin'ny fikarakarana sy fivoriam-be matetika, izay mety hampihena be ny hamafin'ny asa sy hanatsara ny fahombiazan'ny asa.
Ny vano mandanjalanja dia manana ny asan'ny fanapahana rivotra sy ny fiarovana amin'ny tsy mety.Rehefa tapaka ny famatsian-drivotra lehibe, dia miasa ny fitaovana manidy tena mba tsy hianjera tampoka ny vano mizana.
Ny vano mandanjalanja dia mahatonga ny fivoriambe ho mora sy haingana, marina ny toerana misy azy, ny fitaovana dia ao anatin'ny fanjakana fampiatoana amin'ny lafiny telo ao anatin'ny kapoka voamarika, ary ny fitaovana dia azo ahodina amin'ny tanana ambony sy ambany, ankavia sy havanana.
Tsotra sy mety ny fiasan'ny fitaovana fampiakarana mandanjalanja.Ny bokotra fanaraha-maso rehetra dia mifantoka amin'ny tànana fanaraha-maso.Ny tantana fampandehanana dia tafiditra amin'ny fitaovana fiasana amin'ny alàlan'ny fitaovana.Koa raha mbola manetsika ny tahony ianao, dia afaka manaraka ny fitaovana fiasana.
Toetran'ny crane pneumatic balance
A. Ergonomic ambony sy ambany fampiatoana fanaraha-maso dia mety amin'ny miovaova hafainganam-pandeha sy tsara Tuning entana
B. Raha tapaka tampoka ny loharanon'ny rivotra, dia afaka misoroka ny fifindran'ny entana ny fitaovana
C. Raha nanjavona tampoka ny entana, ny centrifuge frein lohataona dia hampitsahatra ho azy ny hetsika miakatra haingana amin'ny tariby.
D. Eo ambanin'ny fanerena rivotra nomena, ny enta-mavesatra entina dia tsy tokony hihoatra ny fahaiza-manaon'ny fitaovana
E. Atsaharo ny entana mihantona tsy hianjera mihoatra ny 6 santimetatra (152 mm) raha toa ka tapaka ny loharanon-drivotra.
F. Hatramin'ny 30 ft (9,1 m) ny halavany ary hatramin'ny 120 in (3,048 mm) ny sakany arakaraka ny karazana tariby
teo aloha: Manipulator miaraka amin'ny kaopy suction
Manaraka: Trolley finday manipulator